DEG DEG:- C/laahi Xuseen Mayoonge oo goordhaw lagu dhaawacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- C/laahi Xuseen Mayoonge oo goordhaw lagu dhaawacay magaalada Muqdisho
Kooxo hubeysan oo watay gaari nooca raaxadda ah ayaa goordhaw degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho ku dhaawacay ku-xigeenka xeer-ilaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle dhexe C/laahi Xuseen Maxamed Mayoonge.
Kooxdaasi ayaa weerar ku qaaday gaari uu la socday C/laahi Mayoonge, waxayna kuhor gooyeen gaarigiisa oo xilligaasi maraayay agagaarka saldhigga degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho.
Weerarkaasi ayaa ku dhaawacmay Gaashaanle dhexe C/laahi Mayoonge, iyadoona sidoo kale uu ku geeriyooday darawalkiisa.
Goobta uu weerarka ka dhacay ayaa islamarkiiba waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka oo halkaasi baaritaano culus ka sameeyay.
Dhinaca kale, ma jirto cid ilaa iyo haatan loosoo qabtay weerarkaasi, waxaana goobta isaga baxsaday kooxihii weerarka ku qaaday ku-xigeenka xeer-ilaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle dhexe C/laahi Xuseen Maxamed Mayoonge.
Ugu dambeyntii, dhaawaca Gaashaanle dhexe C/laahi Mayoonge ayaa la geeyay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana goobta uu weerarka ka dhacay haatan kusoo noqotay mid caadi ah.